Dhammaadkii bishii Juun, ProBlogger ayaa sheegay Steve Scott wuxuu sameynayaa $ 30,000 bishiiba kaliya ka soo buugaagta 킨들.
Bishii Abriil, Forbes ayaa ka warbixisay qoraaga iskiis u sameeyay 마크 도슨. Dawson wuxuu qoraa buugaag wax ku qor kara dambiyada. Laakiin, taasi maahan sheekada dhabta ah halkan. WU sameeyaa $ 450,000 사노 아 buugaagtaas.
Waxaa jira qorayaal kale oo badan oo ka yimaada meelo dhowr ah oo bil walba ah illaa dhowr kun oo doolar bishii. 아마존 아야 살라 난타 다 바카 아다 부가 엘크 타 루니가 아 ee 아마존, 와아 후아 알 아아가가 아이 쿠와 두 나야 in a galaan boggooda waa in a e eegaan.
1 삭다 다 클리가
2 Khasab kuguma aha inaad Buug 코르토
3 Buug cajiib 아
4 사이드 루 Baddalaa Buuggaaga
5 쿠수 카도 아마존
삭다 다 클리가
kasta oo aadan awood u yeelan karin inaad는 iyo jeer saadaaliso intaad ku sameyn laheyd boqortooyooyinka, mid ka mid ah furayaasha si aad lacag ugu uruuriso bartaada blogka ayaa ah inaad abuurto durdurro badan oo dakhli oo lagala.
Buugagtu waa dakhli hadhaaga 아. Buugga hal mar ayaad qoraysaa, waadna sameyneysaa, gelineysaa, waxayna lacag kuu dhiganeysaa illaa iyo inta la iibinayo. kasta oo ay waxyar ka sii badan tahay (waxaad u baahan doontaa inaad ugu yaraan marmarka qaarkood dhiirrigeliso buugga)에서 taasi waa aasaaska aasaasiga ah.
Khasab kuguma aha inaad Buug 코르토
미드 카 미드 아 waxyaabaha quruxda 바간 ee ku saabsan 바타 blogka waa이나 드 bilaabi doontaa이나 드 ururiso waxyaabo 바란 oo waqti 카 바단. Waxaad si sahlan u bilaabi kartaa in aad kala soocdo sheekooyinka ku jira qaybaha oo ay ku wada xidhaan hagayaal iyo buugaag.
Dooro Mowduuc. Tusaale ahaan, haddii aan rabay 이난 xiro qaar ka mid a fariimahayga ku yaal 구리가 Caruurta, waxaan dooran karaa mawduuca "Macmacaanka 글루텐 프리". Waxaan Markaa Ka raadin Karaa koobab ku saabsan qaybtaas, fiiri waxa soo baxay, oo laga yaabo inuu ku daro dhowr ka mid ah kuwa u gaarka ah iyo talooyin qaar akhristayaasha oo ku dhejiya buug loogu talagalay Kindle.
Ka faa’iidaysiga dardargalinta isdhaafsiga. Blogkaagu waa inuu ahaadaa waddo laba dhinac 아. Waxaad kor u qaadi doontaa buugaag aadna u diri kartaa gaadiidka Amazon si aad u iibsato nuqul. Kuwa buuggaaga ku qoran Amazon waxay akhrinayaan waana in a helaan xiriirka iyo booqdaan bartaada.
Buug cajiib 아
카스타 바 하 노 코테, 하디 아드 랍토이나 드 bixiso buug gaar 아, waxaad mararka qaarkood qabsan kartaa 틈새에 qofna uusan horay u qorin iyo helo dhageystayaal cusub labadaba buugtaada iyo bloggaaga.
Waqti ku bixi inaad ku baarto buugaagta la heli karo ee mawduucaaga 아. Maxaa aan la daboolin? Maxaad Ku Dari Lahayd?
이수수 Ururi kiisaska daraasad ee kuwa kale ee warshadaha oo la wadaagaan macluumaadka buugga.
후비이나 드 isticmaashid 코라 와나 악산 Qabso xiisaha akhristaha. Waxaad Doonaysaa in akhristayaashu soo noqdaan oo ay soo iibsadaan buugaga soo socda.
Waxaad u baahan doontaa inaad sameyso xisaab si aad ugu daabacdo Kindle 아마존에서. 하세 Yeeshee, Furashada xisaabtu waa bilaash.
사이드 루 Baddalaa Buuggaaga
Marka Ay Timaado 전자 책, qaabka ugu fudud ayaa ka sii fiican. Isku day이나 드 ku dhejiso 글꼴 aasaaska ah oo ka fogow wax kasta oo wata qoraal ama muuqaallo. 하, xitaa cinwaanka. Kaliya했다 iyo jeer uma tarjunto si fika qaab ebook ah.
Ilaa aad qoreysid buug carruurta, iskuday inaad ku dhejiso qoraalka. Marka hore, haddii aad dooratid ikhtiyaarka 70 % ee daqligaaga (inbadan oo ku saabsan tan daqiiqad gudaheed), waxaa lagugu soo dallaci doonaa sida buuggaagu u weyn yahay. Sawirraduhu Wey SII Ballacayaan Faylka.
아마존 waxay bixisaa tilmaamo laguugu socdo iyada oo loo marayo geedi socodka buuggaaga loogu talagalay Kindle. Waxaa lagu magacaabaa Dhisidda Buuggaaga Xajka.
Waxaad iska diiwaangelin kartaa KDP bilaash, laakiin waa inaad bixisaa macluumaad shakhsi ahaaneed ujeedooyin canshuureed 이요이나 드 hesho lacag.
쿠수 카도 아마존
킨들 다이렉트 (KDP)